Izindaba - K-Tek & Exhibition
Ngemuva kweminyaka eyishumi yentuthuko, i-K-Tek ayinenani elikhulu kuphela labasebenzi abaqeqeshiwe nabezobuchwepheshe neqembu elihle kakhulu labaphathi, kepha futhi uneqembu lokuthengisa elihle kakhulu. Ukuze sivumele amakhasimende amaningi asazi, sihamba njalo emhlabeni ukuhlanganyela emibonisweni, njenge-United States, United Kingdom, Germany, Japan njalonjalo. Sazi inani elikhulu lamakhasimende avela embukisweni, banelisekile kakhulu ngekhwalithi nemikhiqizo yethu yemikhiqizo, ngasikhathi sinye, amakhasimende amaningi angaphandle eza ezovakashela ifektri yaseK-Tek futhi axoxe ngezindaba zokubambisana. isikhuthazo kithi. Siphinde sethemba ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme zemishini kumakhasimende amaningi adinga usizo. Sikumema ngobuqotho ukuthi ubambisane futhi uthuthuke ndawonye.
Izinto zethu ezijwayelekile ziyinsimbi engagqwali, i-aluminium, ithusi, insimbi ephansi yekhabhoni, amaplastiki wobunjiniyela nezinye izinhlobo zensimbi ye-alloy, Singabuye sinikeze ukwelashwa kokushisa kanye nokwelashwa okuhlukahlukene kwendawo kumakhasimende:
1) 5 Axis CNC Machining / CNC Milling / CNC Ukuguqula ；
2) Ukusika izintambo kwe-EDM / WEDM-HS / WEDM-LS ；
ngokunemba metal yokuqedela:
• I-Anodize (Okujwayelekile / Okunzima)
• Zinc Plating (Mnyama / Umnqumo / Luhlaza / ……)
• Passivation (Insimbi engagqwali)
• Isilayidi sesiliva / segolide
I-K-Tek Machining inikezela ngezinsizakalo ze-OEM / ODM, Singakwazi ukwenza ngezifiso ukukhiqizwa kwazo zonke izinhlobo zezingxenye zemishini ngokunemba ngokuya ngezidingo zamakhasimende, imikhiqizo ehlobene nemishini, i-elekthronikhi, ezishintshayo, ezemoto, ezokwelapha, amandla amasha neminye imikhakha. Le nkampani inezinto ezanele zokucubungula imishini kanye nesistimu yokuphathwa kwekhwalithi eqinile, ikhwalithi yezingxenye ezinemba ingahlangabezana namazinga embonini yomhlaba, imikhiqizo ethengiswa phesheya kwezilwandle.
I-K-Tek ekhethekile ekucutshungulweni kwezingxenye zemishini. Izinsizakalo Ezihlanganisiwe Ezikhethekile zihloniphe ubuchwepheshe nezinqubo zakhona. Onjiniyela bethu bazosebenza nawe ukuqinisekisa izinga eliphezulu lokuklama lokukhiqiza nokuhlangana. Ukuhlinzekelwa kahle kwamakhasimende nokweneliseka kuyizimpawu zenkampani yethu futhi kuyisisekelo ebhizinisini lethu lempumelelo. Wamukelekile ukubonisana: sales@k-tekmachining.com Ucingo: (+86) 0769-88459539